चितुवाले काख रित्याएका आमाहरूकाे कथाः शोक र आँसुमा बित्छ दिन – Himshikharnews.com
चितुवाले काख रित्याएका आमाहरूकाे कथाः शोक र आँसुमा बित्छ दिन
२३ भाद्र २०७६, सोमबार १७:३१
आमाको काख रित्याउने गरी घरमै पसेर वर्षेनी चितुवाले बालवालिका खान थालेपछि जिल्लाको स्वाराड क्षेत्रका तीनवटा स्थानीयतहका गाउँ शोक र आँसुमा डुबेका छन् ।
जिल्लाको दक्षिण भेगमा पर्ने मेलौली नगरपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा नरभक्षी चितुवाले घरभित्र पसेर मान्छेको शिकार गर्न थालेको सात वर्ष भयो । यो अवधिमा २४ बालवालिकाले ज्यान गुमाउनुको साथै १२ जना घाईते भएका छन् ।
शिवनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा भदौ २१ गते आँगनमा खेलिरहेका सात वर्षीय सुदिप मडैलाई चितुवाले झम्टेर जंगलमा लगेर खाईदियो । सुदिपलाई आमाले भर्खरै डो¥याएर गाउँ नजिकैको स्कुल लैजानु हुन्थ्यो । चितुवाले बच्चालाई चुँडेर काख रित्तो पारेपछि बालककी आमा कलावती मडैका आँसु रोकिएका छैनन् ।
चितुवाले आधा शरीर खाएको अवस्थामा जंगलमा फेला परेको सुदिपको शव प्रहरी मुचुल्कापछि पोष्टमार्टमका लागि जिल्ला लगियो । गाउँकै केशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर विदामा बसेकाले पोष्टमार्टम हुन सकेन । बच्चाको शव प्लाष्टिकमा पोको पारेर बालकका बुवा रामसिंह मडै ट्याक्टरको पछाडि बसेर ६५ किलोमिटर कच्ची सडक पार गर्दै जिल्लाको पाटन पुग्नुभयो ।
डाक्टर आएपछि तेश्रो दिन बालकको शवको पोष्टमार्टम भयो । पोष्टमार्टमपछि बुवा रामसिंह मडैले पाटनको सुर्नया नदी किनारमा बच्चाको अन्त्येष्टि सकाएर टोलाउँदै घर फर्किनु भएको छ ।
घटनापछि शिबनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर २, टाँडखर्क गाउँ नै त्रसित बनेको छ । बालवालिका स्कुल जान सकेका छैनन् । गाउँमा खेती किसानी गरेर बसेको मडै परिवार शोकमा डुबेको छ । घटनापछि राती जंगलमा चितुवा गर्जिने गरेको स्थानीय शुक्रसिंह मडैले बताउनुभयो ।
गाउँमा पसेर मानव शिकार गर्दै आईरहेको चितुवालाई अहिलेसम्म नियन्त्रणमा गर्न सकेको छैन भने राज्यले पनि बेवास्ता गरिरहेको छ ।
सात वर्षको अवधिमा चितुवाको आक्रमणमा परेर ज्यान गुमाउने बालवालिकामा विशापुरका वीरबहादुर चन्द (डेढ वर्ष), उदयदेवका सुनिल साउद (अढाई वर्ष), पञ्चेश्वरकी सुनिता साउद (१० वर्ष), किथ्थी देवी साउद (२७ वर्ष) र आशाकुमारी कोली (१३ वर्ष) रहेका छन् ।
त्यसैगरी, कुलाउकी निर्मला कुमारी ११ वर्ष, विशालपुरका दिपक चन्द ४ वर्ष, नवीन भट्ट ६ वर्ष, सुरज लोहार १० वर्ष, चम्फाकुमारी भट्ट ११ वर्षका रहेका छन् । आमचोराकी सुप्रिया चन्द ४ वर्ष र मञ्जु चन्द ८ वर्षका रहेका छन् ।
ज्यान गुमाउनेमा गिरेगाडाका सन्तोष चन्द ७ वर्ष, शर्मालीकी पार्वती चन्द, आमचोराका महेश चन्द ४ वर्ष, विशालपुरकी कोपिला चन्द डेढ वर्ष, र प्रतिष्ठाकुमारी बिष्ट ३ वर्ष, सपना लुहार १६ वर्ष, डम्बर सोनी ८ वर्षका पनि विशालपुरकै रहेका छन् । ज्यान गुमाउनेमा उदयदेवकी ललिता साउद ६ वर्ष, महाकालीका सचिन साउद, उदयदेवका चन्चला साउद ७ वर्ष, उजली साउद १२ वर्ष र शिवनाथका सुदिप मडै ७ वर्षका गरी दुई दर्जन बालवालिकालाई चितुवाले आहारा बनाईसकेको छ ।
चितुवाले काख रित्तो बनाएपछि पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४, आमचोराकी निर्मला चन्द घर छोडेर अर्को बिनायक गाउँमा सहारा लिएर बसिरहनुभएको छ । उहाँका ५ वर्षीय छोरा महेश चन्दलाई घरमै आएर चितुवाले दिउँसै खाएपछि उहाँ आफु बस्दै आएको घर छोडेर छिमेकीसँग आश्रय लिएर बसिरहनु भएको हो ।
पीडित चन्दले भन्नुभयो, “घटनापछि त्यो घरमा जानै मन लाग्दैन । छोराकै अनुहार आँखा घुम्छ । राजगारीका लागि श्रीमान् परदेश गएका छन् । ”
चितुवाले काख रित्तो बनाएका स्वराड क्षेत्रका आमाहरुसँग कुरा गर्दा उहाँहरु भक्कानी छन् मात्रै, बोल्न सक्दैनन् । राज्यले चितुवा नियन्त्रण गर्न नसक्दा चितुवा पीडित आमाहरु भाग्य र दैवको खेल सम्झेर देवीदेवताको पूजापाठमा लागेको स्थानीय वीरेन्द्र चन्दले बताउनुभयो ।
चितुवा नियन्त्रण गर्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको शिवनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण साउदले बताउनुभयो । साउदले भन्नुभयो, “ बैतडीको तल्लोस्वराड क्षेत्रमा चितुवाले यति ठूलो क्षति पु¥याउँदा पनि राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । गाउँमा चितुवाको त्रासले बालवालिका स्कुल जान डराएका छन् । वर्षेनी चितुवाको आक्रमणमा परेर स्वराडबासीले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।”
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख केशव पराजुलीका अनुसार चितुवा नियन्त्रण गर्न वनका कर्मचारी र सुरक्षा निकायको टोली चितुवा प्रभावित क्षेत्रमा जाने तयारी भईरहेको बताउनुभयो । सुरक्षाकर्मी परिचालन भए पनि चितुवा सम्बन्धी विज्ञ टोली नआएसम्म चितुवा नियन्त्रण नहुने डिभिजन प्रमुख पराजुलीको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “देशभरीमै बैतडी जिल्ला चितुवा प्रभावित जिल्लामा अग्रस्थानमा छ । सुरक्षाकर्मी मात्र परिचालन गरेर केही हुँदैन भन्ने कुरा त यस अघि पनि देखिसकियो नि ! चितुवा नियन्त्रण नै गर्ने हो भने चितुवा यसरी किन नरभक्षी बन्यो ? चितुवाको आहारा र बासस्थानका बारेमा विज्ञ टोलीले अनुसन्धान गरेपछि मात्र नियन्त्रण हुनसक्छ । ”
जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले चितुवा प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय भएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।यो समाचार गोरखापत्र दैनिकका लागि बैतडीबाट गोकर्ण दयालले लेख्नुभएको हो ।